“Xisbiga Waddani Waa Laga Gar daran Yahay, Sharci Daro Ayaanay Ku Xidhan Yihiin Masuuliyiinta Xidhani” | WAJAALE NEWS
“Xisbiga Waddani Waa Laga Gar daran Yahay, Sharci Daro Ayaanay Ku Xidhan Yihiin Masuuliyiinta Xidhani”
1;Muwaadin kasta waxa uu xor u yahay in uu ra‟yigiisa ku bandhigo qoraal, hadal, muuqaal, suugaan ama qaab kale oo xeerka waafaqsan.
2;Muwaadin kasta wuxuu xor u yahay in uu abaabulo kana qayb qaato, kulan ama bannaan-bax nabadeed oo xeerka waafaqsan.
3;Saxaafadda iyo warbaahinta kale waxay ka mid yihiin xorriyaadka asaasiga ah ee ra‟yi-dhiibashada, waxayna leeyihiin madax-bannaanidooda; way reebban tahay tallaabo kasta oo lagu cabudhinayo; hawshoodana xeer baa nidaaminaya.
1;Qabanqaabiyeyaasha bannaan-baxyada lagu qabanayo fagaare dadka ka dhexeeya ama u furan dadka oo dhan, waxaa waajib ku ah in ay soo ogeysiiyaan Duqa degmada, Gudoomiyaha Gobolka ama wasiirka Arrimaha Gudaha, ugu yaraan saddex maalmood ka hor, si loogu ogolaado Waxaa bannaan-bax fagaare ah loo tixgelinayaa xataa shir lagu qabanayo meel fagaare ah, haba lahaado mid cid u gaar ahe, iyadoo la eegayo tirada dadka ka soo qayb gelaya, ujeeddada iyo mawduuca.
2;Waxaa loo tixgelinayaa shir gaar ah kuwa ay goobahooda ku qabsadaan ururada siyaasadda iyo ama kuwa aan siyaasiga ahayn iyo axsaabta la aqoonsan yahay xarumahooda, haddii aanay isu rogin qaab shirweyne ama kaambeyn degmo, Gobol ama Qaran.
3;Sababo la xidhiidha caafimaadka guud ,degenaanshaha, dhaqanka wanaagsan, kal-dambaynta iyo nabad-gelyada, waxaa Duqa degmada, Gudoomiyaha Gobolka ama wasiirka
4;Qodobada Xeerkan ee loo adeegsanayo kulanada iyo bannaan-baxyada dadweynaha ayaa sidoo kale loo adeegsanayaa socodka dadweynahu waddooyinka ku maraan ee cabasho lagu muujinayo.
2) Waa inaan da’diisu ka yarayn 40 jir kana waynayn 60 jir.
3) Waa inuu Muslin yahay, kuna dhaqma diinta Islaamka.
4) Waa inuu leeyahay aqoon dugsi sare ugu yaraan ama wixii u dhigma.
5) Waa inaanu ka mid ahayn urur/xisbi siyaasadeed, kana madax banaan yahay.
6) Waa in lagu yaqaan dhawrsanaan, sharaf iyo cadaalad bulshada dhexdeeda.
7) Waa inaan dembi ciqaab oo maxkamad horteed kaga cadaadey ku dhicin welligiiba.
8) Waa inuu jidh ahaan iyo maskax ahaanba gudan karaa xilka.
QALINKII; .Mohamed Abdi Jama (Muhamed Dhimbiil)